သခင်ယေရှု၏ကိုယ်ခန္ဓာ သင့်ကိုအလိုရှိသည် 6/6/2011
စံဝင်းချို Daily Hope: The Body of Christ Needs You
“သင်တို့သည် ခရစ်တော်၏ကိုယ်ဖြစ်ကြ၏။ အသီးသီး အင်္ဂါတော်ဖြစ်ကြ၏။” ( ၁ကော ၁၂း၂၇)
ဘုရားရှစ်ခိုးကျောင်း မိသားစုနှင့်ဆက်သွယ်မှုရှိရန်လိုအပ်ခြင်းသည် အခြားယုံကြည်သူများအတွက် လက်တွေ့တာဝန် ကျေပြွန်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးရန်။ ကျမ်းစာက “သင်တို့သည် ခရစ်တော်၏ကိုယ်ဖြစ်ကြ၏။ အသီးသီး အင်္ဂါတော်ဖြစ်ကြ၏။” (၁ကော ၁၂း၂၇)
သင်အမှုထမ်းခြင်းသည် သခင်ယေရှု၏ကိုယ်ခန္ဓာတွင် မုချလိုအပ်သည်----ဒေသခံ ဘုရားဝတ်ပြုကိုးကွယ်သည် နေရာလို။ တစ်ယောက်စီ ကစားရန်ကဏ္ဍများရှိသည်၊ ကဏ္ဍတိုင်းသည်အရေးကြီးသည်။ ဘုရားသခင်အတွက် သေး ငယ်သောအမှုမရှိပါ။ အားလုံးသောအကြောင်းအရာများ။
ဘုရားရှစ်ခိုးကျောင်းများတွင်၊ အရေးမပါသော သာသနာပြုလုပ်ငန်းမရှိပါ၊ အချို့သည်မြင်နိုင်သည်၊ အချို့ကိုမမြင်ရအောင် လျှို့ဝှက်စွာထားသည်၊ သို့သော်လဲအားလုံသည်တန်ဖိုးရှိသည်။ သေးငယ်သော သို့မဟုတ် လျှို့ဝှက်သော သာသနာ လုပ်ငန်းသည် မကြမကြာ ကြီးမားသောခြားနားချက်များပြုလုပ်သည်။ ကျွန်တော်၏အိမ်တွင်။ အရေးကြီးသောအလင်းရောင်သည်၊ ကြီးမားသောမီးပန်းဆိုင်း ထမင်းစားခန်းမှာမဟုတ် ပါ၊ ညမီးလေးဖြစ်ပါတယ်၊ ညဘက်ထသည့်အခါ ခြေချောင်းကလေးများ ခလုတ်တိုက်မိသည်။
အညမညအားဖြင့် ဆက်နွယ်နေမှုသည် အရွယ်ပမာဏ နှင့် အရေးပါမှု ပေါ်မှာမတည်ပါ။ သာသနာလုပ်ငန်း တိုင်းသည် အကြောင်းကိစ္စများဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်တော်တို့အားလုံးသည် တစ်ဦးကိုတစ် ဦး လုပ်ငန်း များတွင်မူတည်နေကြသည်။
ခန္ဓာကိုယ်၏အစိတ်အပိုင်းသည် ကျရှုံးလျှင်လုပ်ငန်းတွင်ဘာဖြစ်မလဲ? သင်ဟာဖျားနာသည်။ ခန္ဓာ၏ကျန်သော အစိတ်အပိုင်းသည် ဝေဒနာ ခံစားရသည်။ စိတ်ကူးကြည့်ပါ သင်၏ အသည်းက သူဘာသာသူနေမည်ဟု ဆုံး ဖြတ် ချက်ချသည်။ “ကျွန်တော်ကင်ပန်းပြီ၊ ကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာအတွက်ယခုမှစ၍အမှုမထမ်းတော့ပါ၊ ကျွန်တော်တစ်နှစ်နားပြီး စားနေခြင်တယ်၊ ကျွန်တော်အတွက်အကောင်းဆုံးကိုလုပ်ခြင်တယ်၊ အခြားအပိုင်းကကျွန်တော်တာဝန်ကိုယူစေခြင်တယ်။”
ဘာဖြစ်မလဲ? သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာသေမည်။ ယနေ့ထောင်ပေါင်းများစွာသော၊ ဘုရားရှစ်ခိုးကျောင်းများသေကုန် ရသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ ဆန္ဒ္ဒမရှိသော၊ တာဝန်မထမ်းဆောင်သော၊ ခရစ်ယာန်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ဘေးမှထိုင်လျက်၊ ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ် နှင့် ကိုယ်ခန္ဓာ ဝေဒနာခံစားနေရသူများလိုနေကြသည်။
ဘုရားသခင်က သင်ကိုခေါ်ခြင်းသည်၊ အမှုထမ်းရန်၊ အဝေးကျော်လွန်၍ ဘာမဆိုသင်တစ်ချိန်တွင်စိတ်ကူး မိမည်။ ဘုရားသခင်ကသင်ကိုဖန်ဆင်းတာ အသက်တာတွင်ကောင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်၊ သင် လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခဲ့သည်။ ဧဖက် ၂း၁၀ “အဘယ်ကြောင့် နည်းဟူမူကား၊ ငါတို့သည် ကောင်းသောအကျင့်တို့ကို ကျင့်ရမည်အကြောင်း၊ ယေရှုခရစ်၌ ပြုပြင်၍ ဖန်ဆင်းတော်မူရာ ဖြစ်ကြ၏။ ထိုကောင်းသောအကျင့်တို့၌ ငါတို့သည် ကျင်လည်ရမည်အကြောင်း၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို ပြင်ဆင်တော်မူနှင့်ပြီ။”
သင်သည်ဘယ်အချိန်မဆို အခြားသူများအတွက်အမှုထမ်းပေးခြင်းသည်၊ သင်ဟာတကယ့်ကိုဘုရားသခင်ကို အလုပ်လုပ်ကိုင်ပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။
Monday June 06, 2011 12:00AM Posted by Rick Warren